Cusbooneysiin - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Raadi Qorshe > Qorshaha Caafimaadka Apple > cusbooneysiin
Ha lumin caymiskaaga. CHPW waxay fududeyneysaa cusbooneysiinta.
Ku cusbooneysii waqtiga, oo waligaa ha ka welwelin nusqaamaha daboolida ama kharashaadka lama filaanka ah. Hayso caymiska, abaalmarinta, iyo adeegga aad ka hesho Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW).
Goorma la cusbooneysiinayaa
Sanadkasta. Waa sax. Xubnaha Apple Health waxay u baahan yihiin inay cusbooneysiiyaan caymiskooda sanad walba. Haddii aadan cusboonaysiin, waxaad waayi kartaa caymiskaaga.
Hay'adda Daryeelka Caafimaadka ee Gobolka Washington waxay warqad u diri doontaa laba bilood kahor taariikhda cusboonaysiintaada. CHPW waxay sidoo kale kula soo xiriiri doontaa taleefanka iyo emayl inta u dhexeysa hal ilaa laba bilood kahor taariikhda cusbooneysiinta.
Sidee loo cusbooneysiiyaa
Cusboonaysiinta 'CHPW' waa mid deg deg ah oo fudud. Khabiirradeenna isdiiwaangalinta maxalliga ah ee saaxiibtinimada leh ayaa halkaan adiga kuugu jira tallaabo kasta oo geeddi-socodka ah. Si aad keligaa u cusboonaysiiso, booqo wahealthplanfinder.org ama wac Xaruntooda Taageerada ee 1-855-923-4633.
Caawimaad taleefan ma u baahan tahay?
Waxaad naga soo wici kartaa 1-866-907-1904 (TTY Dial: 711), Isniinta illaa Jimcaha 8:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo, waxaanan kaa caawin doonaa talaabooyinka. Khabiirradeenna isdiiwaangalinta maxalliga ah ee saaxiibtinimada leh ayaa halkaan adiga kuugu jira tallaabo kasta oo nidaamka ah. Waxaad sidoo kale buuxin kartaa kuweenna foomka xiriir waanan kuu soo wici doonaa.
Caawimaad qof ahaan ah?
Waxa kale oo aad aadi kartaa Xarunta Caafimaadka Bulshada ee deegaankaaga ama ka raadi Navigator Washington Healthplanfinder kuu dhow. Khabiirka diiwaangelinta ayaa kaa caawin doona wixii su'aalo ah. Khabiirradan diiwaangelinta ayaa kaa caawin kara inaad ku dhammaystirto dalabkaaga lacag la'aan.
Raadi CHC kuu dhow
Waxa aad u baahan tahay inaad cusboonaysiiso
Markaad cusboonaysiinta caymiskaaga, waxaad u baahan tahay:
Lambarrada Lambarka Bulshada ee qof kasta oo cusbooneysiinaya
Dakhliga qoyskaaga ee billaha ah
Maxaa loo cusboonaysiiyaa?
Waad caymaysaa Ku cusbooneysii waqtiga, oo waligaa ha ka welwelin nusqaamaha daboolida ama kharashaadka lama filaanka ah.
Waad haysaa caymiska, abaalmarinta, iyo adeegga aad ka hesho CHPW:
Baadhid Barnaamijyada Faa'iidooyinka CHPW. Adeegyadan iyo abaalmarintan ayaa wax weyn ka beddeli kara caafimaadka qoyskaaga waxayna kugu kici doonaan $ 0.
Baro badan oo ku saabsan Caymiska CHPW, oo ay ku jiraan caafimaadka, caafimaadka maskaxda, soo kabashada isticmaalka maandooriyaha, ilkaha, aragga, iyo maqalka. Waxaan had iyo jeer ka shaqeyneynaa sidii aan u horumarin lahayn, markaa faa'iidooyinka waxaa laga yaabaa inay is beddeleen tan iyo markii aad aragtay markii ugu dambeysay.
Read our su'aalaha ku saabsan qorshaha caafimaadka or xubin Su'aalaha caawimaad dheeraad ah.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Diseembar 22, 2021